Hadda tallaalka Pfizer ee COVID-19 ayaa loo oggolaaday in la siiyo carruurta 12 iyo wixii ka weyn, qaar ka mid ah dhakhaatiirta Iowa ayaa sheegaya in waalidiinta qaar weli su'aalo qabaan. Dr. William Ching waa isbitaalleyda a caruurta ee Isbitaalka Midnimada Point Health St. Luke ee Cedar Rapids. Waxa uu sheegay in tan iyo markii tallaalka waa ammaan, haddii carruur badan la tallaalo, waxay ka caawin kara ka heli dhaw in ay difaac lo'da. Muhiimad ahaan, wuxuu leeyahay, carruurtu waxay ku laaban doonaan hawlihii caadiga ahaa.
Waxa uu sheegay in ka mid ah carruurta ku helay tallaalka, ma jiro fayruska ka iyo ma jiraan waxyeelo halis ah.
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa maanta waxay ka warbixineysay shan dhimasho oo dheeraad ah oo COVID-19 ah iyo 305 kiis oo dheeraad ah oo la xaqiijiyay.
Degmada Woodbury waxay ku dartay 3 kiis oo cusub wadarta tirinta maanta.
Dadweynaha ayaa awoodi doona inay daawan karaan dhageysiga dacwada ninkan loo haysto dilka ardayga Jaamacadda Iowa ee Mollie Tibbetts - laakiin shaqsi ahaan maahan. Go'aamadii COVID-19-maamuus, Judge Joel Yates ayaa sheegay in amar taariikhaysan in xubno ka mid ah warbaahinta guud iyo news in aan loo oggolaan doonaa inay ka qayb galaan jirrabaadda kuwa Cristhian Bahena Rivera bilowda isbuuca soo socda.
Laakiin wargeysyada warbaahintu waxay ku shaqeyn karaan kaamirooyinka fiidiyowga ee meelaha fog laga hago si ay si toos ah uga sii daayaan dacwadaha sida tooska ah internetka ama telefishanka. Rivera ayaa la filayaa in maxkamad laga bilaabo Isniinta ee Davenport dil ugu horeysay-degree in dhimashada Tibbetts taagan. Gabadha 20 jirka ah ee dhigata Jaamacadda Iowa ayaa la waayey bishii Luulyo 2018 iyada oo baxsad ku ah magaaladeeda Brooklyn, Iowa